How to install Unicode and Zawgyi readable fonts (hybrid fonts) on iOS - Amrab Angladeshi
Rasheed Satterfield January 31, 2020 91
How to install Unicode and Zawgyi readable fonts (hybrid fonts) on iOS
Mingalarpar How to change the hybrid fonts on your iphone and ipad It already have myfont app on your iphone Go to myfont setting
change how can i make zawgyi and uni how to install hybrid fonts in iphone how to install myanmar fonts iphone myfont unicode unicode myanmar your zawgyi
91 Replies to “How to install Unicode and Zawgyi readable fonts (hybrid fonts) on iOS”
Ei Ei Zin says:
Thxet Pxaing says:
13 မှာ မရ ဘူးဖြစ်နေတယ် အစ်ကို ကျေးဇူးပြုပြီး ပြောပြပေးပါဦး
kyin sein says:
Ko Aung Thu Ra. It'sagood video, but I just want to warn you, people could see your password when they watch this clip.
kay thein says:
AMT Myanmar Vlogger says:
i phone အဂြောာင်းများများတင်ပေး အကို ကျေးဇူးတယ်တယ်
i phone သီချင်းဒေါင်းတဲ့ဆော့ဝဲလ်လေးလမ်းညွှန်ပါ please
Win Let says:
အရင်ဆုံး မေးချင်တာက အဲ့အနောက်က တီးလုံးသံကြီးကို ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ထည့်ထားတာလဲ ပြောတဲ့သူအသံကတိုးရတဲ့ကြားထဲ
အာရုံနောက်တယ် မြန်မာကားတွေအတိုင်းပဲ မလိုအပ်ပဲ တီးလုံးထည့်တာ အတော်ဝါသနာပါကြတယ်ထင်တယ်နော်
thin yee says:
Not ok in iOS13
howw dy says:
cheery white says:
I followed your instructions but can’t still read zawgyi fond. Any idea?
Thank brother 🙏🏻
iOS 13 doen't support Hybrid Font because technically it is not unicode.
Hi anyone, in the other hand, if u want u can use font converter! Download app copy and paste .you can read zaw gi or unicode what u want!
That’s just my opinion. Thank u🙏🙏🙏🙏
Thaw Thaw says:
gboard သုံး နည်းလေးလည်းတင်ပေးပါလားး
Saphone Myint says:
ကျေးဇူးပြုပြီး document app မှ video down နည်းတဆင့်ချင်း ios ထည့်နည်းတင်ပြပေးပါလားကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်
Thein Nwet says:
Ye Thawe says:
bro ပြောတာအရမ်းမြန်ပြတာလဲမြန်နေတယ် ဖြေးဖြေးဆိုအဆင်ပြေမယ်
Thu Ra says:
Funny Dog & Cat says:
Oppof5. မှာ Myfont မပါဘူး ဒါ​ကြောင့်​
ဘာ​ဖောင့်​မှလဲ သုံးလို့မရ မူလအတိုင်းပဲ သုံး​နေရတယ်​
အဲဒါ ဘယ်​လို လုပ်​ရမလဲ မသိလို့ပါ
အရင်​ oppo ​တွေဆို Myfont ပါတယ်​ အမိုက်​စားစာလူံး ​တွေ အကုန်​ သုံးလို့ရတယ်​
အခု f5. မှာ ဘာမှ ထည့်​လို့ မရဘူး
iOS 13 တင်ပီးကတဲကတိုင်ပတ်နေတာ ခုမှစာဖတ်ရနဲနဲအဆင်ပြေတော့တယ်
when is this unicode (world wide) going to be effective?
Hlwan thu says:
That's useful. I watched your video and changed it to my ph.And I can see it both now.
Thar Ngeal says:
Nway eiwah says:
Why can’t see Myanmar font after install iOS 13.1
I can type But I can’t see mm font either zawgyi or Unicode
Plz advise me 🙁🙁
Queen Strong says:
Iphone မဟုတ်တော့ font ကျ ဘယ်လိုပြောင်းမလဲ
Pyae Win Soe says:
ios13 မှာရော Unicode ရော zawgyi ရောဖတ်လို့ရအောင်လုပ်လို့ရတဲ့နည်းရှိပါသလားခင်ဗျား??
Han Su Shi says:
the background music is way too noisy and so disturbing.. I can barely hear what is explaining here.. (sigh!)
13.1.1 မှာလဲ ယူနီကုဒ်ပြောင်းတာ ဖတ်မရသေးဘူးဖြစ်နေတယ် bro ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ?
Aung Lwin Moe says:
အခု version 13.1.1. ရောက်နေပီး လုပ်လို့မ ရတော့ ဘူး
I don’t have profiles & Device management… please… I use iPhone Xs
Ka Khual Phai Tu says:
ပွောသလိုတော့လိုကျလုပျလိုကျတယျဗြ ဒါပမေယျ့ ဇျောဂြီမမွငျရတော့ဘူးဗြ ဘာတှလေိုအပျခကျြရှိလို့လဲမသိဘူးဗြ
Aye Min Han says:
profile မှာ ဇော်ဂျီကို remove လုပ်ဖို့ password မမှတ်မိလို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလည်း
แป้น ตากฟ้าการยาง says:
စာရိုက်တဲ့အခါ keyboard ကဘာကြောင့်နှေးနေရတာလဲ ကျေးဇူး
ပြုပြီးရှင်းပြပေးပါ ။
win strong says:
Pa Dauk says:
not working on ios 13+
Mr-naing linn says:
ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တယ် ဘာလွဲနေလဲသိဘူး ယူနီကုဒ်နဲ့ရေးရင်စာမမှန်တော့ဘူး
Ye Yint Aung says:
Uni ပြောင်းလိုက်တဲ့အခါ ဇော်ဂျီ Contact တွေ အတွက်လည်း ဆွေးနွေးတင်ပြပေးပါဦး။ Thzzz!!
Khin Mar Lwin says:
ရှုပ်တာဟယ် မျက်စေ့အညောင်းမခံချင်တော့ဘူး မပြောင်းချငိတော့ပါဘူး
lin moe Htet says:
kalyar kyi says:
After i installed IOS 13.1.2. i deleted my zawgyi. So unicode is default and is working just fine but i have two problems i can't read messages on notification screen but i can read it in the app. And i can't read my notes in note app that i wrote with zawgyi before i updated to IOS 13. now install zawgyi decode and still can't read the notes that i wrote before. Helpp bro!!!!
လေညင်းလေး ချစ်သူ says:
iPhone ရဲ့original keyboard မှာအက်ခရာနှိုကျကိုဘလိုရိုကျကမှာလဲခငျဗြာ
Yadanar Thaw says:
Thar John says:
အကိုရေ iPhone ကိုယူနီကုဒျနဲ့သုံးတာ အသံဖိုငျစာရိုကျလို့ရအောငျဘယျလိုလုပျရမလဲခမြှ
Rita Tun says:
chitcho cho says:
P' Ko says:
Rahe Mar says:
ios 13 iphone 8 မှာမရဘူးလား Bro
ios 13.1.2 အတွက်Unicode and Zawgyi code နှစ်မျိုးလုံးဖတ်လို့ ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ တစ်ခု့ သွင်းရင်နောက်တစ်ခု့ ကဖတ်မရဘူး
FB မှာ post တငျရငျ font၂ခုလံးနဲ့တငျခငျြရငျ ၂ခါပြန်မရိုက်ရဘဲ အလှယျဆုံးနညျးလေးမြားရှိလားအကို
Lay Myint says:
ဖုန်းsetting ထဲကzawgyi profile
လည်း delete လုပ်ပြီးသွားပြီ
IOS 13 မှာ ဇော်ဂျီဖတ်မရဘူး ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
Profiles&Device management ဟာပျေါမလာဘူးကောကို
ကြယ်တံခွန် HERO says:
ဖုန်း မျက်နှာပြင် ပေါ်က အဝိုင်းလေး ပြန်ဖေါ်နည်းတင်ပေးပါလား
Zawgyi နဲရေးထားတယ် Contacts တွေ က ပြသနာတက်မလားဗျာ ဘာနဲပေါ်မလည် Zawgyi လား unicode လား
Uuu Lol says:
Lu Lu Hpaw Wawm says:
ipad pro မှာဟိုငျးဘတျ ဇျောဒီကုဒျထညျ့ပွီးပွီအဲ့ဒါ ယူနီကုဒျဖတျလို့ရပွီးဇျောဂြီမရဖွဈနတေယျ ဘာဖွဈလို့လဲ ပွောပွပါဦး။ကီးဘုတျကတော့အဆငျပွပေါတယျ။ကြေးဇူးတငျလြှကျပါဗြာ။
salai kyawkee says:
IOS 13.1.0မှာတော့ မရဘူးထင်တယ် အကိုတို့လုပ်သလိုလုပ်ပါတယ်ခဗျ မရပါဘူးခဗျ
iOS 13.1.3 update လုပျလိုကျတာဇျောဂြီမွမငျရတော့ဘူး
shwe man says:
ipad air2 13.13ဗားရှင်းတင်လိုက်တာ fb ကပုံတွေ စာတွေ savephoto လုပ်တာမရတော့လို့ပါ photထဲမှာပုံမတွေပါ သိသူများပြောပြပေးပါ
Evgeny Mikhalev says:
I'm trying to do the same with my custom font which is emoji-like. I install it on the device using configuration profile but device still doesn't recognize unicodes… HELP ME PLEASE SOMEOBODY! https://stackoverflow.com/questions/58992912/installing-fonts-on-ios-with-configuration-profile
Nan Hnin Ei Phyu says:
အရငျက ဇျောဂြီရော ယူနီရောသုံးလိုရတယျ မကွာသေးခငျကပါ အကျဈထဈလုပျလိုကျတာ ဇျောဂြီသုံးရငျ ယူနီမရဘူး ယူနီသုံးရငျဇျောဂြီမမွငျရတော့ဘူး ဘာကွောငျ့ဖွဈတာလဲ ပွောပွပေးပါလား အကို I Phone s+ ios 13.
After I download the font, It’s seem to work with my iPhone but not the iPad. I’m not sure what is going on. It is same iOS. At this time I can only really unicode on my iPad not Zawgyi. I encountered this situation with my aunts to iPhones. Please help, thx
Yemin Yemin says:
Iphone6plus ပါဖုန်းရဲ့gmail passwordမေ့နေလို့ အဲ့ဒါဖျက်လို့ရမလားသိ့ချင်လို့ပါအကို
မောင်သန်း အေး says:
iphone ios 13.3 jailbreak လုပ်နည်းလေးတင်ပေးပါလို့မေတ္တာဖြစ်တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ🙏🙏🙏